Onye na - ebufe 10mW FM - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Nyetụrụ Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » Onye ntụgharị FM 10mW
~ Onye nnyefe FM 10m ~
- Oge Gbasara-
Ihe na - enyefe FM maka ọkwa a bụ ọkwa nke 1 ruo na ngụkọta oge atọ dị iche iche 3 Watt FM Transmitter.
… Emelitere ka abali iri nke October 30, 2002
Getting nweta Wkwụ Fekwụ Gị
Y’oburu na emebeghi uzo LPFM (olu eji olu igha azu n’iru), o ga adi nma ibido site na oru a… ka inweta ihe omuma n’inwe ike mbu FM gi .. ka inweta kwa aka -onye ahụmịhe. Agbanyeghị na 10mW FM Transmitter ga - adị ka ọrụ dị mfe dịka ụfọdụ ndị ga - ekwu, ekwela ka e duhie gị chee na ihe niile ga - adị mma. Okwu a bu 'ihe di nfe' na oru ngo a, obu putara na enwere ihe pere mpe na oru ngo a dika ndi ozo na LPFM. Okwu a bu 'odi nfe' aputaghi na ogba a gha aru oru oma na dandy mgbe itusiri ya. Ọ ka nwere ike sie ike ịnweta ngalaba ahụ ka ọ rụọ ọrụ ọfụma… ma ọ bụ maka nke ahụ… ma ọlị .. mgbe ị mesịrị ree ihe niile dị na bọọdụ ahụ ma gbanye ya. Ọtụtụ ndị na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ na mpaghara vhf. Onye dị elu na-aga ugboro ugboro, ihe ndị ọzọ 'na-emetụ' nkeji ndị a na-aghọ. Enyerela m usoro n’usoro iji rụọ ngalaba 10mW. Ihe kachasi nkpa na oru ngo a bu ka ibigide ihe obula meghariri… ya bu, ekwesighi ikwenye ntinye. M ike na-atụ aro ka ị na-eji nke ọ bụla kwuru akụrụngwa m depụtara… na ị dapụ na ya. Y’oburu n’iru na uzo m otu esi eme ka ogha emeghachita otu a, you ga-enwe ike inweta ya n’ikpeazụ ga-adi elu. Ma ọ bụrụ na ị na-enwe ndidi nso n'akụkụ gị… ị ga-akacha ahụ ka otu na-arụ ya na ọ kacha mma! Ozugbo i mere ka otu ahụ rụọ ọrụ nke ọma yana ihe ndị ị masịrị gị… ị nwere ike ịga n'ihu tinye ịgbakwunye ọkwa nke abụọ… ngalaba 200mw wee mesịa, nke atọ, nke bụ ngalaba 7 watt. Ana m atụpụta mkpebi a amamihe dị na ya bụ na emegola m atọ ahụ… na ibido site na nke mbụ bụ ezigbo ihe!
If ịmara na ịmegharị ndị na-ebugharị LPFM a ma soro ha mee nke ọma, ịnwere ike ịchọrọ ịrị elu 10mW ma malite na 200mW ma ọ bụ elekere 7… ọ dịịrị gị niile. Mana m ga - ekwu, dị ka onye merela ndị na - ebugharị atọ ndị a… ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịmalite site na mbido (ya bụ, bido na nkeji 10mW), wee rụzie ụzọ gị ruo na-enyefe na-esote… ahụmịhe aka bụ onye nkụzi kacha mma n'ụwa niile!
Sugbua enyi m, ị nwere nhọrọ 3 nke ndị na - ebugharị FM ịhọrọ site na: The 10mW, the 200mW or the 7 Watt.
Tndi transseresị FM atọ dị na weebụsaịtị a. Yabụ na etinyereghị m ọzọ, ana m enyefe ọrụ mgbasa ozi FM a dị mma maka ndị na-ahọrọ ịnwa ma mepụta ya.
… Ka oru ngo malite!
Onye ntụgharị Milliwatt FM iri
Ka anyị malite ...
TPCB ụdị ya bụ otu ụdị ụkpụrụ eji eme ihe na 7 Watt FM Transmitter. Lelee egbe ọnya dijitalụ na websaịtị 7 Watt. Rịba ama na foto ahụ… ihe niile etinyere n’elu ọla kọpa… ma ihe ya na ọla kọpa dị na akuku PCB. Ekpebiri m iji ụdị a dị ka ọ dị ngwa ma dịkwa mfe ịgbanwe ihe mepụtara… n'ime ọtụtụ ọnwa nnwale. Yabụ, enweghị oghere a ga-egwu na PCB, belụsọ maka oghere anọ a na-akwụgo. Mgbe ị na-elele 10BW PCB Template n'okpuru, enwere agwaetiti ọla kọpa 12 (shaded na oroma), nke mpaghara ọcha gbara gburugburu. Mpaghara ọcha ndị a bụ ebe enweghị 'ọla kọpa' .Tụ otu a ka ịkwesịrị ịme PCB gị. Enweela m nsonaazụ dị mma na iji ụdị a. Ozugbo ị nwetara ka ọ na-arụ ọrụ, ịnwere ike ịchọ PCB ọzọ… na oghere… ihe ọ bụla masịrị gị. Mana aro m siri ike ‘bụ ime PCB nke mbụ’ dịka ntuziaka m si dị. Will ga-ezi ihe ngosi n’ikpeazụ!
Ggaa n'ihu ma bipụta otu ụdị PCB dị n’elu. Ọ ga-abụrịrị 91mm site na 50mm. Ọ bụrụ na ọ bụghị, zigara ihe osise ahụ na mmemme eserese ma pịa ma / ma ọ bụ gbatịa ruo mgbe ị na-anabatabeghị nke ọma. Ozugbo emechara nke a, ị nwere ike ịga n'ihu na-eme PCB gị otu ọ dị ka ndebiri nke ekwuru. Ka m kwuo ọzọ… e nwere agwaetiti ọla kọpa 12 (ebe ị hụrụ oroma) na tebụl a dị n'elu. Gburugburu agwaetiti ndị a bụ mpaghara enweghị ọla kọpa (ebe ị hụrụ agba ọcha). Ekwesịrị ime ụdị nke dị n'elu dị ka o kwere mee iji wee na-egbu mmụọ m kwuru.
Wị mechala ma rụchaa PCB 'ọhụụ' ọfụma gị, gbue oghere ebe obere oghere ojii dị na ndebiri. Wepịa waya ọla kọpa siri ike 18 n'ime oghere ahụ ma ree waya ahụ n'ihu na n'azụ PCB. Wepụ bebi ahụ. Nke a ga - aga n'ihu na ụgbọ elu ala (nke dị na akuku ihu nke PCB) achọrọ n'azụ PCB.
Oemela nke a emere… ị nwere ike ịga n'ihu na ire ngwa ngwa gị niile dị na PCB. Ejikọtara ihe niile mejupụtara ya na ọnọdụ kwụ ọtọ, ma e wezụga eriri abụọ ahụ. Iji hụ ebe edoziri ihe na PCB, lee anya n'okpuru…
Just dakọtara ọnụ ọgụgụ ahụ na 'Ntinye Nkụzi nke ihe merenụ' na mpaghara a na-ajụ ajụjụ na 'Chartent Chart'.
1A - 5.6K 1/2 Watt Carbon Resistor1B - .001uF Ceramic Capacitor 13 - Nkwakọ mkpuchi ikuku
2 - Igwe okwu Electret 14 - 4.7pF Ceramic Capacitor
3 - 1uF Electrolytic Capacitor 15 - 5-30 Capacitor Variable
6 - 1.2K 1/2 Watt Carbon Resistor 18 - PNP 2N2907 ma ọ bụ MPS2907 Transistor
9 - Ezi ndu na-eweta ike 21 - 1uF Electrolytic Capacitor
10 - Ọgbọ Antenna 22 - NPN 2N3904 ma ọ bụ MPS3904 Transistor
11 - Nduzi na - eduga n’inye ike 23 - 22K 1/2 Watt Carbon Resistor
12 - ppedkwụ ụkwụ na Ikuku Ikuku
Ozi Na-enye Mgbasa Ozi
L1 bụ eriri igwe a na - enweta taịtọ. Naanị pịa PỊA EBE A ịhụ ka esi ewu L1.
If like dị ka m enweghi igwe ihe nnwale, na-abụghị mita eleta eletrik nke ụlọ na DVM, ị nwere ike chọta ebe ana - ebugharị isi site na iji redio AM / FM na - ahụkarị ma gbanye ya na FM… wee gaa n'ụzọ ruo opekempe ugboro… n'ụzọ niile aka ekpe ọkpụkpọ oku… nke dị gburugburu 87 Mhz… ebe ahụ ka m meziri coils maka. Ga-anwale nke a ka onye na-ebunye ya ga-ewepụ ọ bụghị naanị oscillating ugboro, kamakwa ihe kwekọrọ. Ọ bụrụ na enwere naanị otu mgbaama mgbasa ozi na-abịa site na ugboro ole ị ga-achọ ibunye… ọ nweghị nsogbu ị ga - achọta ya… mana iji mgbaama niile… enwere akara mgbakwunye n'akụkụ ọ bụla nke isi. Ọ nwere ike iwe iwe iwe na otu 'isi' akara. I nwere ike iche na have nwere isi mgbaàmà, ma n'eziokwu, ị na-elebanye anya ụdị ụfọdụ dị egwu 'off the Main' Short range signal. Agwawo m ndị mmadụ okwu banyere nke a, ha wee sị na ha achọpụtakwala nke a mgbe ha na-achọ ijide ihe mgbaàmà ya. Cheta cheta nke a… ihe mgbaàmà ọ bụla na - enye gị ohere kachasị… na, enyi m, ọ ga - abụrịrị 'isi' ihe ngosi (ọ bụghị ụdị oku igba) nke oge ahụ. Omume na ndidi ga - enyere gị aka!
Igwe okwu Electret… Radio Shack na-eresị igwe okwu a dị ka njikọ ọnụ ọdụ ụgbọ ala abụọ na njikọta ọnụ atọ. Jiri njikọ abụọ ahụ. Akụkụ nke jikọtara na ụlọ nke igwe okwu bụ akụkụ na-adịghị mma ma ọnụ ahụ na-aga na PCB. Ọzọ ọdụ bụ akụkụ dị mma. Ọzọkwa, mgbe ị nọ na Radio Shack maka ihe a na ihe ndị ọzọ edepụtara n'okpuru, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na bulie ihe dịka otu ụkwụ eriri USB ohm 75. Jiri eriri latrịk a mee ka ịgbatị ogologo igwe elektrik ka ọ ghara ịdị nso na sekit. Enwere m aka nri m na 3 sentimita asatọ, nke na-apụ ma na-apụ na sekit ahụ ma ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ kachasị mma n'ihe banyere idoanya; ịghara ịkọ banyere isi gị ịnọ ntakịrị ebe na ngalaba ahụ ka ọ ghara imetụta ugboro ugboro (lee 'sekit tank' n'okpuru).
2N3904 ma ọ bụ MPS3904 Transistor… Enwere ike zụta transistor a na Radio Shack. Rịba aka na 'Ntụziaka itinye mpaghara' maka ntụgharị kwesịrị ekwesị nke ụkwụ ọ bụla nke transistor. Bee ukwu ya nile na transistor rue 1/4 nke otu inch tupu beelu.
2N2907 ma ọ bụ MPS2907 PNP Transistor… Enwere ike zụta transistor a na Radio Shack. Rịba aka na 'Ntụziaka itinye mpaghara' maka ntụgharị kwesịrị ekwesị nke ụkwụ ọ bụla nke transistor. Bee ukwu ya nile na transistor rue 1/4 nke otu inch tupu beelu.
5-30pF Capacitor Variable… Radio Shack adịghị enye a ihe ọzọ. Mouser Eletrọniki, ebe a na USA, nwere ha. Gaa na websaịtị 7 Watt FM Transmitter iji hụ Nọmba ekwentị Mouser nke Toll. Nke a bụ otu n'ime ngwaọrụ abụọ na - eme ngagharị oscillating (nke a na - akpọkarị 'tank circuit'). A chọrọ capacitors na-agbanwe iji dozie maka ugboro mgbasa na-ebugharị. Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịghọta otu eriri sekit na-arụ ọrụ… ebe ọ bụ na nke a bụ capacitor agbanwe, ya na eriri ikuku nke ị ga - anwale… iji weghara oge nnyefe ịchọrọ. A ga-ahapụ gị n’aka gị imegharị-ozi mgbaama gị nye onye na-anabata gị. Naanị PỊA EBE A ịghọta etu esi emeghari onye na-ebugharị gị ozugbo ị mere ya ma dịrị njikere maka ‘ịgbanye’ mbụ.
Tagbọ a na-akpọ 'tapped'… Nke a bụ ngwaọrụ ụlọ-ọ ga-eme nke gị. Naanị PỊA EBE A maka owuwu mkpuchi. Nke a bụ otu n'ime ngwaọrụ abụọ na - eme ngagharị oscillating (nke a na - akpọkarị 'tank circuit'). A na-achọ eriri mkpuchi iji dozie oge ole ana-ebugharị. Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịghọta otu eriri ụgbọ mmiri si arụ ọrụ… ebe ọ bụ nke a 'Tapped' Air-Core Coil, yana 5-30pF Variable Capacitor, ị ga-anwale… iji wee wepụta oge mgbasa ozi ịchọrọ ịchọrọ. A ga-ahapụ gị n’aka gị imegharị-ozi mgbaama gị nye onye na-anabata gị. Naanị PỊA EBE A ịghọta etu esi emeghari onye na-ebugharị gị ozugbo ị mere ya ma dịrị njikere maka ‘ịgbanye’ mbụ.
1N914 Diode… Enwere ike zụta ngwa a na Radio Shack. Lelee polarities na diode. Kathode (nke ahụ bụ akụkụ adịghị mma nke diode) na-aga n'ala.
Igwe eji achọta ihe eji achọta diski anọkọ ihe dị na anọ na anọ… Nke a bụ ikike na-enweghị ikike, nke pụtara na ọdịghị mkpa bụ nke ejiri ejiri mee ihe. Naanị ijide n'aka na otu ụkwụ ga-emitter nke MPS2907 na ụkwụ nke ọzọ na-aga onye nchịkọta nke MPS2907. Edobe anya ukwu ụkwụ ole na ole karịa 1/8 nke anụ ọhịa na transistor kwuru.
Resistor nke 27K… Agaghị ahụ igwe nrụgide a na Redio Shack. Ya mere, zụta 5.6K na 22P resistor ma tinye ha n'usoro na PCB. The ohmage ga-anọ nke ọma. Enweghị m mgbanwe ọ bụla na ọdịyo ahụ site na iji usoro a.
Antenna… Ejirila m mpi anọ ma ọ bụ ise na steeti a wee tụnye ya nke ọma. Inwere ike ịzụta telescopic elekere anọ ma ọ bụ ise na Redio Shack. Nhọrọ ọzọ nwere ike ịbụ uwe ogologo abụọ agbatịkwuru wee bido gbadaa ise.
Oyou gwụla ịmechara otu a, ọ dịla njikere ilegharị anya gburugburu 88 Mhz. Nke ahụ pụtara na nke a bụ njedebe kachasị dị ala na mgbasa ozi FM. Choo obere nnata FM ma tugharia ya na 88 MHz. Mgbe ahụ debe redio nnata FM ihe dị ka ụkwụ 50 site na onye na-ebugharị. Tụgharịa olu ka ihe dị ka ọkara na onye nata. Bido bido megharịa igweja gị nke na - enyefe gị, ka ị na - ekwu okwu n'ime ya, iji bulie olu gị na onye na - anabata gị. Mgbe ịmara ịmara oge ole ị na-ekwu, ma nwee afọ ojuju n'ụzọ ọ na-ada, sonye n'otu enyi ma gaa obodo ma ọ bụ ókèala mepere emepe ma hụ ruo n'ókè akụkụ ahụ nwere ike ibufe. Ga-anọnyere onye na-ebugharị ya mgbe ị na-ekwu okwu na igwe okwu ma mee ka enyi gị jiri nwayọ pụọ n’ebe ị nọ mgbe ị na-ejide ihe nnata. Gwa ya ka o welite ogwe aka ya… mgbe anaghi anu olu gi. Mgbe ahụ ị ga - enwe echiche doro anya banyere ókè ebe ngalaba gị ga - ebufere. Cheta ịhapụ ụdị ụgbala ọ bụla pụọ ​​na 'ahịrị nke anya' n'ihe metụtara onye na-ebugharị ya na nnata. Gụpụrụ m otu akwụkwọ ozi ka m mara ka ihe siri gaa. A na m echere gị echiche kacha mma. Ya mere enyi m…